शिल्पालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं – अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार अभिनेत्री पोखरेलको जिल्ला अदालतविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले अभिनेत्री पोखरेलको रिट निवेदन खारेजसँगै उनलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अभिनेत्री पोखरेलले सर्वोच्चमा बहुविवाह पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न माग गर्दै विसं. २०७६ साउन २९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। रिटमाथि पहिलो सुनुवाईमा सर्वोच्चले गत भदौ १ मा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले पक्राउ पूर्जीको कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको थियो।
‘पक्राउ पूर्जी बमोजिम म पक्राउ परेमा अपुरणीय क्षति पुग्ने’ दाबी रिट निवेदनमा गरेकी थिइन। उनले आफूले बहुविवाह नगरेको यसअघिका हेमा लगायतले कानुनअनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकाले आपूmलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरेकी थिइन्। विसं. २०४१ सालमा निर्माता ओझाले पहिलो पत्नी हेमासँग विवाह गरेका थिए । हेमाले आफूसँग सम्बन्धविच्छेद नै नगरी विवाह गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद –११ अनुसार बहुविवाह कसुर ठहर भएमा निर्माता ओझा र अभिनेत्री पोखरेललाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।
पतिसँग सम्बन्धमा दरार आएपछि हेमा सम्बन्धविच्छेद नगरी अंशबन्डा गरेर बसेकी थिइन्। हेमापछि निर्माता ओझाले गीताञ्जली, रेखा थापा र शिल्पा पोखरेलसँग विवाह गरेका थिए। हाल गीताञ्जलीको निधन भइसकेको छ भने रेखा थापासँग निर्माता ओझाले सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन्। गीताञ्जलीको निधन भइसकेको हुँदा उनीबाट जन्मिएका छोरा निर्माता ओझासँगै बस्ने गर्छन् । लामो समयदेखि धरान बस्दै आएकी हेमा र निर्माता ओझाका दुई सन्तान छन् ।
निर्माता ओझाकी पहिलो पत्नी हेमाले अंशबन्डाभै छुटेर भिन्न भइसकेकी पत्नी भएको उल्लेख गरेकी छिन्। त्यसपछि निर्माता ओझा र अभिनेत्री रेखा थापाबीच विसं. २०५७ सालमा विवाह भएर विसं. २०६९ सालमा अंशबन्डा भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धबिच्छेद समेत भइसकेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन्। ‘म निवेदक शिल्पा र छविराज ओझालाई विपक्षी बनाई बहुविवाहको जाहेरी दर्ता गरिएको र ममाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको कानुन बमोजिम छैन,’रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०९:०५ बुधबार